चीन र भारत मिल्दा नेपालमा के होला ?
काठमाडौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशमन्त्रीमा एस जयशंकरलाई चयन गर्नु सामान्य घटना थिएन। भारतीय जनता पार्टी भित्र दीग्गज विदेश मामला जानकारहरुलाई पन्छाएर पूर्व विदेश सचिवको चयन महत्वपूर्ण निर्णय थियो। भारतको स्वार्थमा काम गर्न सक्ने कुशल कुटनीतिज्ञलाई मोदीले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका थिए।
जयशंकर विदेशमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट शुरु गर्नुमा भारतको चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखिएको सन्देश हो। चीनको राजदूतको अनुभव सँगालेका जयशंकरलाई मोदीले चीन पठाउँदा दोस्रो कार्यकालमा मन्त्रीहरुमध्येबाट पहिलो विदेश भ्रमण बन्यो चीन। त्यसमाथि चीन पुगेर जयशंकरले विश्वमा अन्यौल भइरहँदा समेत भारत र चीनबीचको सम्बन्ध स्थिरता कायम राख्ने महत्वपूर्ण कारक बन्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिए।
एशियाका दुई सभ्यताका उद्गमस्थल भारत र चीनबीचको सामिप्यता मोदी कार्यकालबाट बढेको हो। सि जिङपिङ सिधै गुजरात पुगी नरेन्द्र मोदीसँग सावरमती नदी छेउ बसेर भेटवार्ता गरेको इतिहास साक्षी छ। त्यसरी नै मोदी चीन पुगी सि जिङपिङको गृहक्षेत्र पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए। भारत र चीनबीचको सामिप्यता र सम्बन्ध यति घनिष्ट बनि सकेको छ कि छिमेक मामलामा पनि एकले अर्कामाथि खासै दबाब दिन छाडि सकेका छन्।
दुई शक्तिबीचको नेपाल
नेपाल चीन र भारतबीचमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। अझ यथार्थमा भन्नु पर्दा भारतवेष्ठित देश हो। डा. बाबुराम भट्टराईले पिएचडी शोधपत्रमा नेपाललाई इन्डियालक्ड भनेका छन्। भूगोलको यथार्थलाई मनन गर्ने हो भने नेपालका लागि भारत निकै महत्वपूर्ण देश हो। सामरिक स्वार्थका लागि बलिया देशहरुले जतिसुकै भूमिका देखाउन खोजेपनि नेपालका लागि भारत अपरिहार्य मार्ग बनेको छ। जसलाई परिवर्तन गर्न भूगोलको परिवर्तन बाहेकबाट सम्भव छैन। यही यथार्थलाई मनन नगर्दा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व बेला बेलामा असफल नीति अख्तियार गर्न पुग्दछ।
भारतलाई घुर्काउन चीनतर्फ लाग्ने र चीनलाई घुर्काउन भारततर्फ लाग्ने अथवा दुवैलाई घुर्की देखाउन पश्चिमा देशहरुसँग निकटता बढाउने रणनीति बनाउनेहरु नभएका होइनन्। तर, वर्तमानमा भारतकार्ड या चाइनाकार्ड भुत्ते सावित हुन्छ। चीन र भारतको निकटता र दुवै देश आफ्नो फाइदाका लागि मिल्ने गरेको यथार्थ जगजाहेर छ।
यस्तो अवस्थामा भारत विरुद्ध चाइनाकार्ड र चीनविरुद्ध भारतकार्डको औचित्य नरहने भइ सकेको छ। त्यसैले, देशको बाडगोर सम्हाल्नेले चीन र भारत निकै सुदृढ सम्बन्ध बनाएर बढिसहेको र एक अर्काविरुद्धको काड झन् प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। यो यथार्थलाई नबुझी रणनीति बनाउन खोजे नेतृत्व असफल भइहाल्छ देशले पनि सास्ती भोग्छ।
१४ मिनट अगाडि
१७ मिनट अगाडि